VidMix Apk Android को लागि नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् [भर्खरको संस्करण]
शीर्ष रेटेड Android स्टोर
»VidMix Apk Android को लागि नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् [भर्खरको संस्करण]
डिसेम्बर 1, 2020
4 /5( 55 वोट )
हामी फिल्मको लागि टिभी कार्यक्रमहरू र एपिसोडहरू हेर्नको लागि नि: शुल्क प्लेटफर्मको खोजी गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि अर्को अनुप्रयोग साथ आएका छौं। VidMix Apk त्यो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईं ती सबै प्रोग्रामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो। यसबाहेक, यससँग विभिन्न प्रकारका विधाहरू छन्।
एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्
यसभन्दा पहिले हामीले धेरै अनुप्रयोगहरू समीक्षा र साझेदारी गरेका छौं जुन समान फोरमलाई VidMix प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, ती सबै अनुप्रयोगहरू आफ्नै तरिकामा उत्तम र अनुपम छन्। तर हामीले यस अद्भुत अनुप्रयोगका लागि यति धेरै अनुरोधहरू प्राप्त गरेका छौं कि हामी यस लेखमा यसलाई समीक्षा गर्नेछौं।
मलाई आशा छ तपाईं यस अनुप्रयोगको साथै यो लेखको पनि आनन्द लिनुहुनेछ। जब तपाईं यो पोष्ट पढ्ने कार्य पछि, तपाईं पछिल्लो संस्करण अनुप्रयोगका लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस पोष्टको अन्त्यमा एक सीधा डाउनलोड लिंक दिइएको छ, त्यसैले केवल त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र Apk पाउनुहोस्।
VidMix के हो?
Vidmix Apk कसरी डाउनलोड गर्ने?
VidMix Apk चलचित्र प्रेमीहरूको लागि एन्ड्रोइड अनुप्रयोग हो जहाँ उनीहरूले हजारौं फिल्महरू, टिभी-शोहरू, श्रृंखला, वेब श्रृंखलाहरू र अधिक पाउन सक्दछन्। यसका धेरै प्रकारका सुविधाहरू छन् र तपाईं त्यो अनुप्रयोग भित्र केहि खेलहरू खेल्ने मौका पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए, ती सबै सुविधाहरू एकल अनुप्रयोगमा सिधै उपलब्ध छन्। तपाईं त्यस्ता अनुप्रयोगहरू विरलै पाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंसँग त्यस्ता सामानहरू ल्याउन हामी सँधै छौं।
यससँग विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि छुट्टै अंशहरू छन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मनपर्नेहरू समात्न सजिलो बनाउँदछ। सामान्यतया, केहि अनुप्रयोगहरूमा, तपाईले यस प्रकारको वर्गीकरण प्राप्त गर्नुहुन्न र तिनीहरूले सबै चीज अनियमित रूपमा साझा गर्दछन्।
त्यसोभए, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले हेर्न वा डाउनलोड गर्न चाहेको सामग्री खोल्नको लागि गाह्रो हुन्छ। यस अनुप्रयोगको अर्को राम्रो सुविधा यो हो कि तपाईं आफ्नो Android मा प्रत्यक्ष Tv हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न तर यो सत्य हो कि यो फिल्म र खेलहरू बाहेक बहु कार्यहरू वा सुविधाहरूको साथ आउँदछ। एक अर्को रोमाञ्चक सुविधा जुन प्रत्येक चलचित्र प्रेमीले त्यस्ता अनुप्रयोगहरूमा राख्न चाहन्छ भिडियोहरूको लागि डाउनलोड विकल्प हो।
त्यसो भए तपाईले चाहेको भिडियोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र लिंक डाउनलोड गर्न तपाईलाई निर्देशित गरिनेछ।
भिडियोहरू डाउनलोड गर्न विभिन्न ढाँचाहरू छन्, पहिले, तपाईसँग कति डाटा प्याकेज छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। किनभने यदि तपाईंले कुनै पनि भिडियो पूर्ण एचडी गुणस्तरमा डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईंले पूरै डाटा योजना गुमाउन सक्नुहुनेछ।
तर तपाईं अनलाइन खेल्न सक्नुहुनेछ जुन उपयुक्त छ किनकि यो भिडियो सुरूमा यति धेरै समय लिदैन। यसबाहेक, त्यहाँ कुनै बफरिंग मुद्दा छैन जुन यो सजिलै 3G जी नेटवर्कमा कार्य गर्न सकिन्छ।
आकार 13.65 एमबी
विकासकर्ता VidMix टीम
प्याकेज नाम com.vidmix.app
आवश्यक एन्ड्रोइड ..5.0 र माथि
मैले माथिल्लो अनुच्छेदहरूमा VidMix Apk का अधिक सुविधाहरू उल्लेख गरिसकें। जे होस्, यदि तपाईंसँग यो सम्पूर्ण लेख पढ्ने समय छैन भने, म तपाईंलाई तपाईंलाई यी बुँदाहरू पढ्न सिफारिस गर्दछु।
किनभने यी मुख्य पोइन्टहरूको माध्यमबाट तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि यसले वास्तवमा यसको फ्यानहरूलाई के प्रस्ताव गर्दछ। जे होस्, यदि तपाईं यो पृष्ठमा हुनुहुन्छ भने यसको मतलब यो छ कि तपाईंलाई यो अनुप्रयोग मनपर्दछ।
यसले तपाईंलाई चलचित्रहरू, कार्यक्रमहरू, लघु फिल्महरू र एपिसोडहरू हेर्न प्रस्ताव गर्दछ।
तपाइँ १० भन्दा बढि देशहरूबाट लाइभ टीभी च्यानलहरू स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ जो मानिसहरु आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणहरु मा डाउनलोड गर्न को लागी सीधा खेल खेल्न चाहान्छन् को लागी एक अलग हिस्सा छ।
तपाईं सजीलै मनपर्ने भिडियोहरू, चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, एपिसोडहरू र अधिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
यसले तपाईंलाई YouTube बाट भिडियोहरू प्ले गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईं युट्यूब भिडियोहरू डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
तपाईं थप्न र व्यक्तिगत प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ तपाईं वेबसाइटहरू ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई थप चलचित्रहरू हेर्न र डाउनलोड गर्ने मौका प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यो भिडियो डाउनलोडर हो किनकि तपाईं भिडियोको URL प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न यूआरएल बक्समा टाँस्नुहोस्।
र अधिक धेरै तपाईं यो एकल अनुप्रयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
म सबै कुञ्जी सुविधाहरू पढिसकेपछि निश्चित छु, तपाईं यो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईंसँग यसको लागि एक प्रामाणिक र प्रत्यक्ष डाउनलोड लिंक हुनुपर्दछ।
त्यसो भए हामीले यो पोष्टको अन्त्यमा लिंक प्रदान गरेका छौं। केवल त्यहाँ जानुहोस् र यसमा क्लिक वा ट्याप गर्नुहोस्। फाईल आकार सानो छ र यसले minutes मिनेट भन्दा बढि लिदैन।
भिडियो सामग्री डाउनलोड गर्नका लागि तपाईं निम्न अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
VidMate-HD भिडियो डाउनलोडर एपीके
यदि तपाईं एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको लागि VidMix Apk भर्खरको संस्करण जस्तै थप आश्चर्यजनक अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी यहाँ तपाइँको वेबसाइटमा यहाँ ल्याउँदछौं। तर अहिलेका लागि, तपाईं यो अद्भुत प्लेटफर्मको मजा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईंको प्रतिक्रिया तल टिप्पणी अनुभागमा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
अब सेयर गर्नुहोस्
Android को लागी VidMix
कला र डिजाइन (3)
नि: शुल्क नक्शा र नेभिगेसन अनुप्रयोग (1)
स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती (10)
नक्सा र नेविगेशन (2)
यात्रा र स्थानीय (6)
भिडियो प्लेयर र सम्पादकको (22)
खाद्य र पेय (2)
खेल ह्याकि। (23)
भूमिका निभाउनु (7)
ह्याकि Apps एप्स (26)
समाचार र पत्रिकाहरू (4)
नि: शुल्क सामाजिक अनुप्रयोग (1)
वाइफाइ ह्याकि। (4)
प्रतिलिपि अधिकार - 2021 RoidHub - शीर्ष रेटेड Android स्टोर